Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNgoc Cuong
Ilali yaseMangala iPhu Quoc 2 Phu Quoc likhaya elinamagumbi amathathu okulala. Zonke zenziwe ngencasa kwaye ezininzi zibonelela ngobutofotofo obufana nomabonakude wescreen seLCD, iitawuli, ukufikelela kwi-intanethi - ngaphandle kwamacingo (ecomplimentary), kunye ne-air conditioning. Ipropathi ibonelela ngeendawo ezahlukeneyo zokuzonwabisa, igadi ...
I-Mangala Village i-Phu Quoc 2 yindawo efanelekileyo yokuhlala kubahambi abafuna umtsalane, induduzo, kunye nokulula kwiPhu Quoc.
* Ukudluliselwa kwisikhululo seenqwelomoya sasePhu Quoc okanye kwidolophu yaseDuong Dong ukuya kwilali yaseMangala Phu Quoc 2:
I-villa imalunga ne-12.9 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePhu Quoc kunye ne-20km ukusuka kwidolophu yaseDuong Dong, elilingana ne-15-25 imizuzu ngemoto kwi-DT 46. Kukho iindlela ze-2 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nedolophu yaseDuong Dong ukuya kwiMangala Village Phu Quoc 2: Ngebhasi okanye iteksi:
-Ngebhasi: Iishedyuli zebhasi kwisikhululo seenqwelomoya sasePhu Quoc
I-Airport FARE-An Thoi: intlawulo ye-20,000 VND
I-Duong Dong-An Thoi: intlawulo ye-30,000 VND
Ixesha: ukusuka ngo-6:00 kusasa ukuya ku-18:00 ebusuku. Yahlulwe ngemizuzu engama-20 / uhambo.
Uza kuhla ePhu Son Ha Noi Resort kwisikhululo sebhasi iMangala Village Phu Quoc 2 ibekwe ngaphakathi kwePhu Son Resort.
- Iteksi: Ixabiso leteksi yendlela enye imalunga ne-200,000 - 250,000 VND ngokuxhomekeke kuhlobo lwemoto izihlalo ezi-4 okanye ezi-7, kuxhomekeke kwinkampani yeteksi oyikhethayo kunye nexesha lokubhukisha.
* Ukudluliselwa ukusuka eBai Vong Pier ukuya kwilali yaseMangala Phu Quoc 2:
Ukuba usuka kwi-pier ungacela ukuthenga itikiti lebhasi ukuya kwidolophu yase-An Thoi
Uya kuhla ePhu Son Ha Noi kwindawo yokuchithela ibhasi yokumisa iMangala Village Phu Quoc 2 yiVilla ngaphakathi kwePhu Son resort.
* Uthutho ePhu Quoc:
Kukho izithuthi ezi-2 eziphambili: iteksi / imoto kunye nesithuthuthu. Nangona kunjalo, iindwendwe ezihlala eMangala Village Phu Quoc 2 zihlala zifudukela kwiindawo zokutyela, ukutyelela iteksi ubukhulu becala. Unokukhetha iinkampani zeteksi ezidumileyo ezifana neVinasun, Mai Linh, Sasco Phu Quoc, ...
* Ukusuka kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ukuya kwiindawo ezidumileyo zabakhenkethi ePhu Quoc:
Iindwendwe ezihlala eMangala Village Phu Quoc 2 rhoqo ngeyona njongo iphambili yokungena kunye nokuchacha kukuba kukho imfuno encinci yokubona indawo kunye nokhenketho. Nangona kunjalo, indawo ekuchithelwa kuyo iiholide isaququzelela ukukhenketha kokubona iindwendwe okanye iindwendwe zinokuzicwangcisa ngokwazo ukutyelela ezi ndawo zilandelayo zabakhenkethi kunye nabakhenkethi kwindawo yaseSouth Island:
-Ihlabathi leLanga uMhlonishwa uThom:Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide imalunga ne-4.9 km ukusuka kwiMoto yekhebula ye-Hon Thom, ilingana nemizuzu eli-10 ngemoto kwindlela kaNguyen Van Cu - DT46. Amaxabiso eteksi yendlela enye asuka kwi-VND 100,000 ukuya kwi-VND 150,000 ngokuxhomekeke kwisithuthi esinezihlalo ezi-4 okanye ezisi-7, kuxhomekeke kwinkampani yeteksi oyikhethayo kunye nexesha lokubhukisha.
Imoto yeentambo eSun World Hon Thom wawongwa nguMbutho weeRekhodi zeHlabathi iGuinness, "Eyona moto inde ehlabathini - 7,899.9m". Apha, uya kubona imiboniso yomlingo, imiboniso yobugcisa evela kubadanisi baseUkraine, bathathe inxaxheba kwimidlalo eyonwabisayo elwandle. Ngaphandle koko, izinto ezifana nePaki yaManzi, iPaki yoMxholo, i-Aquarium ... iya kuqaliswa kungekudala.
+ Iiyure zokuvula ukusuka ngo-8:00 - 17:30 yonke imihla.
+ Ixabiso letikiti ngeenkcukacha: 500.000 VND 2 indlela.
- I-Ho Quoc Pagoda (i-Truc Lam Ho Quoc Zen Monastery): I-Mangala Village Phu Quoc 2 malunga ne-4,5 km ukusuka kwitempile, elilingana nemizuzu eyi-8 ngemoto kwindlela yeNguyen Van Cu - DT46. Ixabiso leteksi yendlela enye malunga ne-80,000 - 90,000 VND kuxhomekeke kuhlobo lwemoto enezihlalo ezi-4 okanye ezi-7, kuxhomekeke kwinkampani yeteksi oyikhethayo kunye nexesha lokubhuka.
I-Ho Quoc Pagoda ihanjelwe ngabaBhuda kunye neendwendwe ezininzi ngonyaka. Le yenye yeeprojekthi kwiprojekthi yendawo yabakhenkethi bomoya egubungela ummandla ongaphezulu kweehektare ezili-110. Nangona ibekwe kwinkqubo efanayo yeTruc Lam Zen Monastery, uyilo lweHo Quoc Monastery yahluke kancinane kwezinye iitempile zeZen kuba i-pagoda yakhiwe ngokupheleleyo kwiintsika zentsimbi ngoko ke ubude bamagumbi nawo bulinganiselwe. ukuphakama kwepali yomthi. Ukongeza, itempile inesibingelelo seMonsignor njengepagodas eMantla.
Umbuki zindwendwe ngu- Ngoc Cuong
Sihlala sikuvuyela ukukunceda endleleni yakho, iindawo zokutyelela ezidumileyo kunye nezinye iinkonzo zasekhaya. Ukwamkela iindwendwe kuhlala kusisipho esisinika iindwendwe ezihlala apha.